Archive du 17-mai-2022
Constant Raveloson « Fehezo ny harena be eto raha te ho tafavoaka isika »
Tena mbola mila mitolona isika, hoy i Constant Raveloson anisan’ireo vavolombelon’ny tantaram-pirenena sy tantara politika teto ary nandray anjara mavitrika tamin’ny tolon’ny 1972.
Mahafaty antoka ve ny mandamina ?
Ny taona 2018 – 2019 ny vondrona eoropeanina tamin’ny alalan’ny iraka manokana nalefany teto no efa nanamarika fa misy zavatra mila amboarina sy ahitsy ary hatsaraina amin’ny fomba fitantanana sy fikarakarana ny fifidianana eto.
Kaominina Betafo Namoaka mpiofana informatika 392 isa
Niampy 152 ireo tanora mahay ny fototra amin’ny informatika hikirakirana solosaina ao Betafo, Faritra Vakinankaratra.
Taranja Kick Boxing Mangingina ny Malagasy, misongadina ny Maorisianina
Mangingina ny Malagasy, tompon’amboara kosa ny Maorisianina. Izay hatreto no azo hamintinana ny tontolon’ny taranja Kick Boxing aty amin’ny ranomasimbe indianina.
Lisi-pifidianana tsy mety madio 500 000 vao nisoratra anarana, 263 314 nesorina
Nifanarana ny nanomboka ny alahady 15 mey lasa teo ny fanavaozavana isan-taona ny lisi-pifidianana,
Vaksinin’ ny kitrotro sy fizarana vitamina A Zaza 4. 645 796 no ezahina hahazo tombontsoa
Vaindohan-draharahan'ny Fitondram-panjakana ankehitriny araka ny velirano fahadimy teboka voalohany ny fampivoarana ny fahasalaman'ny Reny sy ny zaza manerana ny Nosy.
Famokarana siramamy Ho avy eny an-tsena ny vokatry ny « Mini-sucrerie » Antanamifafy
Mitsimoka tsikelikely ireo orinasa madinika mamokatra ny zavatra ilain’ny mponina amin’ny fiainana andavanandro. Iray amin’ireny ny orinasa madinika famokarana siramamy na « Mini-sucrerie » ao Antanamifafy,
Jean Eric Rakotoarisoa “Misy ny tody ary ny ratsy atao no miverina”
Nikatona ny vavahadin'ny oniversiten'Antananarivo izao maraina izao, hoy ny filohan’ny fitsarana avo momba ny lalampanorenana teo aloha, Jean Eric Rakotoarisoa, omaly.
Mpisoloky amin’ny finday Nisy namaky bantsilana ireo laharana
Ireto laharana Telma ireto dia mpisoloky, hoy ny mpikirakira tambazotran-tserasera sady mpanao gazety iray omaly, namaky bantsilana ny laharan’ireo mpisoloky amin’ny finday niantso azy.
Manandona - Vinaninkarena Nozeran’ilay tovolahy ny vato ny lohan-drenibeny
Tsy fantatra intsony na nihetsika aretina ity tovolahy iray voalaza fa voan’ny androbe tany Manandona Vinaninkarena omaly.
Fihetsiky ny TGV-Mapar Lasa propagandy ho an-dRavalo sy ny TIM
Mihamafy ny tahotra ara-politikan’ny volombosary. Miezaka maneho sary etsy sy eroa amin’ny famoriam-bahoaka tsy hitsitsiana vola aman-karena, mety voafaoka hatramin’ny volam-panjakana aza angamba hoenti-manatanjaka ny antoko TGV,…
Fahataran’ny karaman’ny PAT eny Ankatso “Ny tompon’andraikitra ara-bolan’ny oniversite no fositra”
Miverina indray ny grevin’ny mpandraharaha PAT (Personnel Admnisitratif et Technique) eny amin’ny Oniversiten’Antananarivo.
Fandraisana Paramed ho mpiasam-panjakana Betsaka ny tsy fahatombonana, hoy ny sendika
Miisa 700 mahery hatreto manerana ny Nosy ny isan’ireo Paramed noraisina ho mpiasam-panjakana taorian’ny fampanantenana nataon’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka,
Sampati Foibe FJKM Hanao ny “Fitraofambe” andiany voalohany
Araka ny fanapahan-kevitry ny Sampati Foibe FJKM sy ny komity foibe dia hanomboka ny andiany voalohany amin’ny antsoina hoe “Fitraofambe” ny Sampati Foibe FJKM amin’ity taona ity.
Zaza Ramandimbiarison « Mahay mihaino ve ny fitondrana ? »
Tontosa iny ny fitsirihina nataon’ny vondrona eoropeanina mikasika ny fanaraha-maso ny fifidianana, hoy ny mpanao politika, Zaza Ramandimbiarison.
PARAMED Anisan’ny tena miantoka ny fikarakarana ny marary
Manana ny anjara toerany eo amin’ny fikarakarana ny fahasalamam-bahoaka ny paramed ahitana ny mpampivelona sy ny infirmiera.
Rangahy nifoka rongony be loatra Ny zanany vavy ihany no naolany
Tena mampidi-doza ny fifohana rongony. Rangahy iray 35 taona no nahavita nanolana ny zanany vavy naterany vokatr’izany tany amin’ny faritra Betsiboka.
Nilaozan’ny « frein » Nifatratra tany amin’ny fanariam-pako ilay kamiao
Kamiao kely iray mpitatitra simenitra no tapaka tsindry hisatra omaly maraina teny Ambolokandrina.
Ilay izy dia tahaka ny efa ataonareo fahazarana e ny miteniteny kanefa tsy mandinika e.Tsy vitan’ny vava be fotsiny anie ny fandaminana fiarahamonina sy fitantanana firenena fa misy lafin-jaatra maro tsy maintsy jerena tsara e.